20 arday oo oo ka qalan jabisay machadka tababarka Saxaafada ee Soomaali Journalism College. | puntlandi.com
20 arday oo oo ka qalan jabisay machadka tababarka Saxaafada ee Soomaali Journalism College.
Munaasabad ay ku qalin jabinayeen 20 arday oo ka baxday tababarka Saxaafada ka bartay Macadka Soomaali Journalism College ayaa lagu qabtay Magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland.
Munaasabad oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay Masuuliyiin ka socday Wasaaradda Warfaafinta Puntland,Waxgarad,Haween iyo dhalinyaro.
Gudoomiyaha Macadka Soomaali Journalism College Jaamac Cabdiraxmaan Shiikh Axmed oo ka warbixiyey u jeedooyinka loo aasaasay macadka ayaa sheegay in loo aasay sidii loo soo saari lahaa wariyayaal xirfad iyo aqoon u leh saxaafada iyo in shaqo abuur ay dhalinyaradu ka helaan.
Macadka oo furan mudo sanad bar ah ayaa waxaa ka baxay ilaa 50 arday oo bartay cilmiga Saxaafada kuwaas oo qaybo kamid ah ay ka shaqeeyaan xarumaha warbaainta ee garoowe sida uu sheegay gudoomiyaha mahcadku.
Jaamac Cabdiraxmaan ayaa intaa ku daray in macadka ay ka go,antahay inuu soo saaro suxufiyiin xirfad iyo aqoon sare u leh warbaahinta waxaana uu tilmaamay in macadku uu xarumo cusub ku yeelan doono Magaalooyinka Puntland.
Qaar kamid ah Suxufiyiinta ka baxay macadka ayaa sheegay u mahad celiyey maamulka Schoolka waxaana ay sheegeen inay ka go,antahay in aqoonta ay barten ay uga faa,iideeyaan dalka iyo dadka ayna wax ka badali doonaan Saxaafada Puntland.
Masuuliyiintii kale ee ka hadlay munaasabada ayaa ku amaanay Macadka Saxaafada Soomaaliyeed ee Somali Journalism College dadaalku uu ugu jiro sidii uu soo saari lahaa suxufiyiin tayo saxaafadeed leh iyagoona dardaaran u soo jeediyey ardayda.
Ugu danbayntiina Macadka ayaa ardayda gudoon siiyey shahaadooyin waxaana sidookale ardaydu ay maamulaha macadka gudoon siiyeen shahaado sharaf.